चीनका यति शक्तिशाली राष्ट्रपति शी जिनपिङ किन झुक्नुपर्यो?
बीबीसी। हङकङलाई चीनको प्रत्यर्पण कानुन विरुद्धको लडाइँमा जित हासिल भएको छ। चीनका अधिकारीसँग घण्टौं लामो चलेको बैठकपछि हङकङका चीफ एग्जिक्यूटिभ क्यारी ल्यामले सरकारले यो कानुनलाई अस्थायी रुपमा स्थगित गरेको घोषणा गरे। चीनले पनि हङकङको घोषणाको स्वागत गरेको छ। यो कानुनका…
आफ्नै बुवाबाट यौन शोषणमा परेकी लेखिकाको कहानी
बीबीसी। अमेरिकी नाटककार ईव एनस्लरले १९९० को दशकमा आफ्नो ‘द वजाइना मोनोलाग्स’ नाटकमार्फत निकै चर्चा बटुलिन्। यो नाटकको मञ्चन १४० भन्दा धेरै मुलुकमा गरिएको छ। र यसमा महिलाको सहमति र असहमति विनाको यौन अनुभवको कहानीलाई वर्णन गरिएको छ। जहाँ पनि…
तपाईँसँगै तपाईँकै घरमा बास बस्ने गरेका यी २ लाख सूक्ष्म किटाणुलाई भेटौँ न त
बीबीसी । वैज्ञानिकहरूले हालै हाम्रा घरमा सयौँ हजार साना जनावरका प्रजाति बस्ने गरेको पत्ता लगाएका छन्। केही त्यस्ता सूक्ष्म जीवले हामीलाई बिरामी पार्ने भएपनि केही त फाइदाकारी छन्। जस्तो कि यीष्टले मदिरा बनाउनमा सहयोग पुर्‍याउँछन् भने क्यामल क्रिकेट भनिने किराले…
त्यो बैठक जहाँ हिटरलाई पराजित गर्ने योजना बनेको थियो
माइक म्याकएचेरन लण्डन (बीबीसी) । दक्षिण पश्चिमी स्कटल्याण्डको गौलोभो पहाडहरुलाई यहाँका जंगल, खोँच र तालका लागि चिनिन्छ । तर, रोयल एअर फोर्सका पूर्व पाइलट र बारुद कारखानाका पूर्व इन्जिनियरल ८१ वर्षीय मोरिस सर्भिसलाई यहाँ हरेक कुना कुनामा इतिहास देखिन्ट ।…
बोल्दिनँ भन्दाभन्दै जब ट्रम्पले सार्वजनिक गरे आप्रवासीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सहमतिको अंश
बीबीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँग गरिएको आप्रवासीसम्बन्धी एउटा सहमतिको केही विवरण असावधानीवश सार्वजनिक गरेका छन्। संवाददाताहरूसँग बोल्दै उनले आप्रवासी नियन्त्रण गर्ने योजनाबारे विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरे। मेक्सिकोलाई सही समयमा त्यो घोषणा गर्न दिन आफूले चाहेको उनको भनाइ थियो। तर…
गुठी विधेयक : धर्म संस्कृति मास्ने र माफियालाई पोस्ने नियत
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध आइतबार काठमाडौंमा प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनलाई सरकार विरोधी आन्दोलनका रुपमा लिएर व्यापक दमन गरियो । यसले सबैभन्दा बढी काठमाडौंका…
इमरान खानमाथि मोदीले किन विश्वास गर्न सकेनन्?
सुशांत सरीन रक्षा मामलीका जानकार बीबीसी। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग दोस्रो पटक वार्तामार्फत विवाद सुल्झाउने पहल गरेको पहिलो पटक होइन। अघिल्लो हप्तामा इस्लामावादले भारतसँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको संकेत गरेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र…
आफैंसँग यौन उत्तेजना आउने युवतीको कहानी
बीबीसी। ‘यो कुरा सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, म सधैं आफैंलाई देखेर आकिर्षत हुन्छ।’ अन्य टिनेजर्स जस्तै मलाइ पनि आफ्नो व्यक्तित्व र सुन्दरताको चिन्ता हुन्छ। जब म नुहाउँदै हुन्छु वा कपडा लगाउँदै हुन्छु, वा सेक्शुअल आकर्षणको खोजीमा हुन्छु तब म आफूलाई ऐनामा…
समुन्द्रमा जलपरी पनि हुँदैनन्, राक्षस पनि हुँदैनन्, हुन्छ के?
बीबीसी । हामीले फिल्ममा प्रायः समुन्द्रको डर लाग्दो अवस्था देखेका छौं होला । समुन्द्रको निलो सतह अचानक सेतो देखिन्छ । र त्यसमाथि तैरिएर आएको जहाजलाई आउँदै गरेको खतराको संकेत दिएको जस्तो लाग्छ । यस्तो डर लाग्दो अवस्था कैयौं मानिसहरुले देखेका…
‘मेरो बुवा महिला हुनुभयो र अहिले मेरो आमा हुनुहुन्छ’
बीबीसी । ‘म सम्झनै सक्दिनँ उनी पुरुषका रूपमा कस्तो थिइन् केही वर्षपछि अहिले त एकदमै सामान्यजस्तो लाग्छ।’ १७ वर्षीया मेको लुगा राख्ने दराज सार्लोटले पनि प्रयोग गर्छिन्। उनीहरू दुवैले फूलबुट्टे एउटा हरियो रङ्गको लुगा छाने र त्यसमा राम्री देखिनेमा सहमत भए।…